कञ्चनपुर र कैलाली हावाहुरी पीडित भन्छन्: ‘सेना आउँदा सास फेर्न पाइयो’ -
कञ्चनपुर र कैलाली हावाहुरी पीडित भन्छन्: ‘सेना आउँदा सास फेर्न पाइयो’
Posted on June 12, 2019 by J NP
हावाहुरीका कारण सयौँ घरहरु क्षतिग्रस्त भएका छन् भने कतिपय बस्तीहरुमा बिजुलीका पोलहरु भाचिँदा स्थानीयवासी अन्धकारमा दैनिकी काट्न विवश भएका छन् । क्षतिको एकिन विवरण सङ्कलन भइरहेका बेला बुधबार बिहान कञ्चनपुरको कृष्णपुर नगरपालिका–६ मौरीफाँटाका ५५ वर्षीया दानी ओडले कच्ची घरको माथि त्रिपाल मिलाइदिइरहेका नेपाली सेनाको टोलीलाई सामान दिएर सहयोग गरिरहेको अवस्था भेटियो ।
झण्डै एक साताअघि कञ्चनपुरमा आएको भीषण हावाहुरीले यहाँको कृष्णपुर नगरपालिका–६ मौरीफाँटाका स्थानीय बासिन्दाका घर पुनःनिर्माण गर्र्दै नेपाली सेनाको सिंहशार्दूल गुल्मको सैनिक टोली । यहाँ घर÷टहरा पुनःनिर्माण तथा अवरुद्ध सडक सञ्जाल खुलाउन सेना तीन दिन अघिदेखि खटिएको छ । तस्बीरः शेरबहादुर सिंह ।
“हावाहुरीले घरको छाना उडाएर उठिबास लाग्यो ।” हावाहुरीबाट घाइते भएकी श्रीमतीलाई देखाउँदै ओडले भन्नुभयो, “परिवारका अन्य सबै सदस्यहरुले खाटमुनि लुकेर ज्यान जोगाए ।” कञ्चनपुरका हावाहुरीले सबैभन्दा बढी कृष्णपुर नगरपालिकामा क्षति पु¥याएको तथ्याङ्क छ । हावाहुरीले पूर्णरुपमा क्षति पु¥याएपछि त्यहाँका पीडितहरु अहिले पनि छिमेकी र खुल्ला आकाशमुनी रात बिताउन बाध्य भइरहेका छन् । “राहतको नाममा यही एउटा त्रिपाल वडा कार्यालयबाट मिलेको छ”, ओडले भन्नुभयो, “घरभित्रको अन्न भिजेर काम नलाग्ने भएपछि किनेर खादैछौँ ।”
उहाँले हावाहुरीपछि सेना बस्तीमा आउँदा गाउँलेहरुलाई निकै राहत पुगेको बताउनुभयो । “सेना आएर अवरुद्ध सडक खुलाउनेदेखि घरका छानाहरु बनाइदिने काममा अहोरात्र खटिएको छ”, उहाँले भन्नुभयो, “सेनाकै सहयोगले घरको त्रिपालको छानो बनेर मुश्किलले सास फेर्न पाएको छु ।” पूर्ण रुपमा क्षति पुगेका स्थानीयवासीलाई गाँसबासको समस्या बल्झिँदै गएको उहाँको भनाइ छ । “खुल्ला आकाशमुनि सुत्दा बालबालिकाहरु लामखुट्टेको टोकाइले बिरामी पर्न थालिसके”, उहाँले भन्नुभयो, “सिंहदरबार अझै गाउँमा आएको भन्नु बेकार रहेछ ।” त्यसैगरी कृष्णपुर नगरपाकिला– ६ कै ३८ वर्षीय तिलक भट्ट दम्पतीसहित घरमा सहयोग गरिरहेको सेनाको टोलीसित काममा व्यस्त छन् ।
“घरको छाना उडाएर राति खाटमुनी पसेर चार जनाको परिवार बाच्यिौँ’, भट्टले भन्नुभयो, “अहिले सेना आएर छाना बनाउन सहयोग गर्दैछ ।” उहाँले सेनाले उद्दार लगायतका काममा सहयोग गरेको सुनेपनि गाउँमै आएर घरका छाना बनाउनेदेखि अहिले दिएको हरेक समस्या समाधानमा खटिएको देख्दा गाउँले हर्षित भएको बताउनुभयो । “स्थानीय तहबाट त्रिपाल दिएको भए पनि अन्य राहत अहिलेसम्म केही आएको छैन”, उहाँले भन्नुभयो, “खरीद गरेर ल्याएको ३० किलोग्राम चामलले परिवारको भोक टार्दैछु ।”
हावाहुरीले वडा नं. ६ मा मात्रै ५० को हाराहारीमा बिजुलीका पोलहरु भाचिँएका छन् । भने रुखहरु ढल्दा सडकसमेत अवरुद्ध भएको स्थानीयको भनाइ छ । “धन्न सेना आएर गाउँमा सडक खुलाएपछि आवतजावत गर्न सहज भएको छ”, स्थानीय रगि नगारीले भन्नुभयो, “क्षतिको विवरण सङ्कलनबाहेक राज्यबाट अरु केही सहयोग पाएको छैन ।” स्थानीयवासी गङ्गाराम भट्टले स्कूलको छाना भत्किदा विद्यालय बन्द हुनुका साथै खानेपानी र बिजुलीको समस्याले यहाँका बासिन्दा आक्रान्त बनेको बताउनुभयो ।
“जस्तापाता भएका घरहरु प्रायः सबैमा क्षति पुगेको छ”, उहाँले भन्नुभयो, “सेनाबाहेक अन्य सरकारी निकायबाट केही सहयोग भएन ।” त्यसैगरी मौरीफाँटाकै १८ वर्षीया मनिषा बोहरा हावाहुरीपछि छिमेकीको घरमा घाइते दिदी टिकेश्वरी बोहरासित आश्रय लिदैछिन् । उहाँका बुवा प्रेम बोहरा र आमा देवसरादेवी बोहरा हावाहुरीले छानो भत्किदा घाइते भएका थिए । “आमाको कोहलपुरमा उपचार हुँदैछ”, उहाँले भन्नुभयो, “त्रिपालसमेत नपाउँदा घरमा बस्न सकिएको छैन ।”
भत्किएका छाना÷टहरा पुनःनिर्माण गर्न नेपाली सेनाको सिंहसाशूल गुल्मको टोली कृष्णपुर नगरपालिकामा खटिएको छ । गुल्मबाट उपसेनानी चेतन छत्कुलीको नेतृत्वमा खटिएको सैनिक टोली विगत तीन दिनदेखि गाउँमा खटिएको छ । हावाहुरीपछि जिल्लामा बसेको सुरक्षा समितिको निर्णयानुसार सेनाले प्रभावित क्षेत्रमा सहयोगका लागि खटिएको बताइएको छ । (तस्बीर उपलब्ध छ ।) –––
चट्याङ लागेर नवलपरासीमा एकको मृत्यु
विश्व बालश्रम विरुद्धको दिवस, अझै उस्तै छ बालश्रम
मुना खत्री : जसले अन्तरराष्ट्रिय मानव तस्करको जालो तोडिन
दशँै तिहारलगायत चाडपर्व नजिकिँदै गर्दा जिल्लामा बजार अनुगमनमा तीव्रता
बिहीबारबाट मौसम क्रमिक सुधार हुँदै जाने :जल तथा मौसम विज्ञान विभाग मौसम पूर्वानुमान महाशाखा
बिहान ९ बजेर ५३ मिनेट जाँदा लमजुङलाई केन्द्रबिन्दु भएर ४.५ रेक्टर स्केलको भूकम्प
नेपाली सेनाद्वारा शान्ति सैनिकको भत्ता वृद्धि गर्ने निर्णय
शिख धर्मावलम्बीका प्रवर्तक श्री गुरु नानकको ५५०औँ जन्मजयन्तीका अवसरमा नेपाल राष्ट्र बैंकले सिक्का प्रकाशन
मौसमको खराबीका कारण काभ्रेमा चार हेलिकोप्टरको आकस्मिक अवतरण
भारततर्फ लैजाँदै गरेको ठूलो परिमाणमा मटर बरामद
ट्याक्सी चालकले बजाउछन यति राम्रो बासुरी, जहा ग्राहक कुर्छन त्यहि लाग्छ भिड
नवलपरासीपूर्व नवलपुरको धौवादीमा रहेको फलामखानी उत्खननका लागि सरकारको अग्रसरता
यातायातका साधन नपुग्दा पिठ्यूँमै सामग्री बोकेर गुजारा
गोदावरी नगरपालिकाले चोरी, दुर्घटना, अपराध नियन्त्रणलगायतका गतिविधि घटाउन सिसी क्यामेरा जडान गर्ने !
चिकित्सकले निको पार्न नसकेको उपचार आफूले निको पार्न सक्ने दाबी गर्दै आएका यहाँका धामीझाँक्री पछिल्लो समय चिकित्सककहाँ गएर आफ्नो उपचार गराउदै
कास्कीको पर्यटकीय क्षेत्र मादी गाउँपालिका–१ सिक्लेसमा रु दुई करोडको लागतमा नम्जु च्युउली युँउला क्होइबु निर्माण गरिने
राप्ती नदी तर्ने क्रममा बगेर एक व्यक्ति बेपत्ता
जोर्डनमा जारी एएफसी यू–१६ च्याम्पियनसिप छनोटअन्तर्गतको दोस्रो खेलमा नेपाल कुवेतसँग बराबरी
इन्द्रजात्राको रथयात्राका समयमा प्रचार भए पनि रथयात्रापछि भैरव र गणेश ओझेलमा
दश हेक्टर जमीनमा फूलखेती
बाढीपहिराका कारण दिक्तेल–चखेवा सडकमा डेढ करोड क्षति
तीन दिनयता परेको पानीका कारण धानखेती गर्ने किसानमा खुशी
पाँच महीनाको अवधिमा विपद्का घटनामा परी २७१ जनाको मृ*त्यु
नेपालको इतिहासमै कलङ्कका रुपमा रहेको कपिलवस्तु घटना : पीडित भन्छन् न्याय खोज्न कहाँ जाने ?